မျောရငျညိုတဈယောကျ စပါးဈမှာ အင်ျဂလိပျကစားသမားထဲက လူယုံအသတျခံခဲ့ရတာလား? – Sports A2Z
စပါးဈအသငျးဥက်ကဌ လီဗိုငျးအနနေဲ့ မျောရငျညိုကို လကျလှတျစပယျ ထုတျပယျခဲ့တာဟာ တကယျ့ကို ကမူးရှူးထိုးလုပျရပျဖွဈတယျလို့ နေးလျဝါးနော့ချက ဝဖေနျသှားခဲ့သလို ဒီဖွဈရပျရဲ့နောကျကှယျမှာ မျောရငျညိုဟာ လူယုံအသတျခံခဲ့ရတာလို့ သူက ယူဆထားကွောငျး သိရပါတယျ။
လီဗိုငျးဟာ ကစားသမားအငျအားစုတှရေဲ့ ပါဝါကို မလှနျဆနျနိုငျခဲ့ဘဲ အသငျးကစားသမားတှအေလိုကြ မျောရငျညိုကို အလုပျထုတျခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး သူ့ရဲ့အဆိုအရ သိရပွီး မျောရငျညိုအားအကိုရဆုံး အင်ျဂလနျသားတယောကျက သူ့ကို သစ်စာ စဖောကျခဲ့တယျလို့ အတပျပွောသှားခဲ့တာပါ။
စပါးဈအသငျးအနနေဲ့ လာမယျ့ရကျပိုငျးအတှငျး ကာရာဘောငျဗိုလျလုပှဲကို ကစားဖို့ ရှိနခြေိနျမှာ မျောရငျညိုကို ထုတျပယျခဲ့ခွငျးက အခု အရမျးပှဲဆူနတေဲ့ စူပါလိဂျပွိုငျပှဲရဲ့စနကျဖွဈတယျဆိုတဲ့ သုံးသပျခကျြတှကေလညျး အလြှိုအလြှို ထှကျ ပျေါနပေါသေးတယျ။
လီဗိုငျးရဲ့ မဆငျမခွငျလုပျရပျဟာ နညျးပွတှကေို မလေးစားမှုဖွဈပွီး နညျးပွထကျ ကစားသမားတှကေို သွဇာအာဏာပိုပေးထါးတဲ့ သဘောတရားကိုလညျး ဝါးနော့က ထောကျပွသှားခဲ့ပွီး လီဗိုငျးရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြကိုလညျး မေးခှနျးထုတျသှားခဲ့တာပါ။
” မျောရငျညိုကို ခပျလှယျလှယျ ထုတျခဲ့တဲ့လုပျရပျက လကျခံခငျြစရာ တစကျမှမရှိဘူး။ ကစားသမားတှကေ မနှဈမွို့လို့သာ သူ့ကို အထုတျခံရအောငျ ဝိုငျးလုပျလိုကျကွတာပါ။ ဒါကို အတိတျကဖွဈစဥျတှမှောလညျး တှခေဲ့ပွီးပါပွီ”
“စိတျအခြဥျပေါကျနတေဲ့ ကစားသမားတှကေ နောကျကြောကို ဓားနဲ့ဝိုငျးထိုးကွတဲ့ မျောဒနျဘောလုံးလောကကိုးဗြာ။ အသငျးပိုငျရှငျတှကေ ကစားသမားပါဝါကို ရှတေ့နျးတငျလာကွပွီဗြ။ နညျးပွရဲ့လုပျပိုငျခှငျ့ဆိုတာဘာလဲ? ”
” စပါးဈရဲ့ နောကျဆုံးပှဲစဥျတခြို့ကို ခငျဗြားကွညျ့ကွညျ့လိုကျ။ မျောရငျညိုအားကိုးရတဲ့ အင်ျဂလနျသားတယောကျက ဘာအရေးမှမပါသလိုကို ခွတေလှမျးတောငျ မလှမျးခငျြတဲ့ပုံစံနဲ့ ကစားနတောကို တှရေ့လိမျ့မယျ။ သူ့ကစားပုံကို မွငျပွီးခြိနျမှာ မျောရငျညိုအထုတျခံရတော့မယျဆိုတာ အနှေးနဲ့အမွနျပဲလို့ ကွိုတငျတှကျဆမိခဲ့ပါတယျ” လို့ ဝါးနော့ချက ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
ZAWGYI: စပါးစ်အသင်းဥက္ကဌ လီဗိုင်းအနေနဲ့ မော်ရင်ညိုကို လက်လွတ်စပယ် ထုတ်ပယ်ခဲ့တာဟာ တကယ့်ကို ကမူးရှူးထိုးလုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ နေးလ်ဝါးနော့ခ်က ဝေဖန်သွားခဲ့သလို ဒီဖြစ်ရပ်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ မော်ရင်ညိုဟာ လူယုံအသတ်ခံခဲ့ရတာလို့ သူက ယူဆထားကြောင်း သိရပါတယ်။
လီဗိုင်းဟာ ကစားသမားအင်အားစုတွေရဲ့ ပါဝါကို မလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့ဘဲ အသင်းကစားသမားတွေအလိုကျ မော်ရင်ညိုကို အလုပ်ထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သူ့ရဲ့အဆိုအရ သိရပြီး မော်ရင်ညိုအားအကိုရဆုံး အင်္ဂလန်သားတယောက်က သူ့ကို သစ္စာ စဖောက်ခဲ့တယ်လို့ အတပ်ပြောသွားခဲ့တာပါ။
စပါးစ်အသင်းအနေနဲ့ လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်း ကာရာဘောင်ဗိုလ်လုပွဲကို ကစားဖို့ ရှိနေချိန်မှာ မော်ရင်ညိုကို ထုတ်ပယ်ခဲ့ခြင်းက အခု အရမ်းပွဲဆူနေတဲ့ စူပါလိဂ်ပြိုင်ပွဲရဲ့စနက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေကလည်း အလျှိုအလျှို ထွက် ပေါ်နေပါသေးတယ်။
လီဗိုင်းရဲ့ မဆင်မခြင်လုပ်ရပ်ဟာ နည်းပြတွေကို မလေးစားမှုဖြစ်ပြီး နည်းပြထက် ကစားသမားတွေကို သြဇာအာဏာပိုပေးထါးတဲ့ သဘောတရားကိုလည်း ဝါးနော့က ထောက်ပြသွားခဲ့ပြီး လီဗိုင်းရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်း မေးခွန်းထုတ်သွားခဲ့တာပါ။
” မော်ရင်ညိုကို ခပ်လွယ်လွယ် ထုတ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရပ်က လက်ခံချင်စရာ တစက်မှမရှိဘူး။ ကစားသမားတွေက မနှစ်မြို့လို့သာ သူ့ကို အထုတ်ခံရအောင် ဝိုင်းလုပ်လိုက်ကြတာပါ။ ဒါကို အတိတ်ကဖြစ်စဉ်တွေမှာလည်း တွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီ”
“စိတ်အချဉ်ပေါက်နေတဲ့ ကစားသမားတွေက နောက်ကျောကို ဓားနဲ့ဝိုင်းထိုးကြတဲ့ မော်ဒန်ဘောလုံးလောကကိုးဗျာ။ အသင်းပိုင်ရှင်တွေက ကစားသမားပါဝါကို ရှေ့တန်းတင်လာကြပြီဗျ။ နည်းပြရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာဘာလဲ? ”
” စပါးစ်ရဲ့ နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တချို့ကို ခင်ဗျားကြည့်ကြည့်လိုက်။ မော်ရင်ညိုအားကိုးရတဲ့ အင်္ဂလန်သားတယောက်က ဘာအရေးမှမပါသလိုကို ခြေတလှမ်းတောင် မလှမ်းချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ ကစားနေတာကို တွေ့ရလိမ့်မယ်။ သူ့ကစားပုံကို မြင်ပြီးချိန်မှာ မော်ရင်ညိုအထုတ်ခံရတော့မယ်ဆိုတာ အနှေးနဲ့အမြန်ပဲလို့ ကြိုတင်တွက်ဆမိခဲ့ပါတယ်” လို့ ဝါးနော့ခ်က ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။